Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Premier League ee maanta ay Kooxda Arsenal booqanayso Watford – Gool FM
(Watford) 15 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ciyaareysa kulankeeda horyaalka Premier League maanta, iyadoo booqanaysa naadiga Watford xilli natiijooyin kala duwan ay ka soo baxeen kulammadii la dheelay horyaalka Ingiriiska.
Liverpool, Manchester United iyo Chelsea ayaa shalay guulo gaaray, xilli kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ee Manchester City ay guuldarro xalay kala kulantay Norwich City.
Tababare Quique Sanchez Flores ayaa rajaynaya inuu wadada guusha dib ugu soo laabto marka ay maqribnimada maanta oo Axad ah ay garoonkooda Vicarage Road ku soo dhoweynayaan kooxda Arsenal.
Tababaraha reer Spain ayaa dib loogu soo celiyay xilli ciyaareedkiisii labaad kaddib markii la ceyriyay Javi Gracia, kaasoo kooxda ka tagay kaddib markii uu hal dhibic ka helay 12-kii dhibcood ee la heli karay ama suuro-galka u ahaa.
Taariikhda: Axad, 15 Sept 2019
Craig Cathcart ayaa seegi kara kulanka kooxdiisa Watford ay la leedahay Arsenal, maxaa yeelay waxa uu qabaa dhibaato dhanka muruqa ah.
Daafacan ayaa maqnaanshaha kula biiraya Troy Deeney oo dhaawac ah, iyadoo kabtanka kooxda Hornets uu wali ka soo kabanayo qalliin jilibka looga sameeyay.
Weeraryahanka kooxda Arsenal ee Alexandre Lacazette ayaa garoomada ka maqnaanaya illaa ugu yaraan bisha October maxaa yeelay waxa uu ka dhaawacan yahay canqowga.
Daafaca dhexe ee Gunners Rob Holding ayaa markale taam ah kaddib markii uu sagaal bilood garoomada kaga maqnaa dhaawac jilibka ah, laakiin ma ciyaari doono kulanka maanta.
Hector Bellerin iyo Kieran Tierney ayaa tababarka buuxa ee kooxda Arsenal ku soo laabtay Khamiistii, laakiin kulanka maanta ayaa aad deg deg ugu ah oo hoosta ka soo galay, umana badna inay daafacyadan ciyaaraan maanta.
>- Watford ayaa guuldarro la kulantay shan ka mid ah lixdii kulan ee ciyaaraha Premier League ay wajahday Arsenal, kulanka kalena waa guushii soo laabashada ahayd oo ay 2-1 kaga adkaadeen Gunners bishii October sanadkii 2017-kii.
>- Arsenal ayaa guuleysatay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay la dheeshay kooxda Watford, iyadoo shabaqeeda gool ka ilaashatay mid kasta oo ka mid ah kulamadaas, xaqiiqdii Watford ayaa ahayd kooxda kaliya ee aan wax gool ah ka dhalin Gunners xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Midkoodna 12-kii kulan ee sare ee u dhaxeeyey kooxaha Watford iyo Arsenal ee ka dhacay garoonka Vicarage Road midkoodna ma uusan ku dhammaanin barbaro – Watford ayaa guuleysatay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu horreeyay, iyadoo la kulantay hal guuldarro, halka Arsenal ay guuleysatay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyay, isla markaana ay la kulantay hal guuldarro.
>- Watford ayaan laga badinin saddexda kulan ee ugu horreeya oo ay kulammada horyaalka ku ciyaaraan garoonkooda tan iyo xilli ciyaareedkii 1991-92, Hornets ayaa ku guuleysatay saddexdii kulan ee furitaanka oo ka dhacay garoonka Vicarage Road xilli ciyaareedkii hore.
>- Arsenal ayaa laga dhaliyey sagaal gool oo rigoore ah horyaalka Premier League tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedkii hore, kaliya Kooxda Brighton & Hove Albion oo laga dhaliyey 10 gool ku laad ayaa ka badan.
>- Watford ayaan guuldarro la kulmin shan kulan oo xiriir ah oo ay kulammada horyaalka ku ciyaarayso garoonkeeda tan iyo bishii December sanadkii 2013-kii, markaasoo uu kooxda ku hoggaaminayey Gianfranco Zola tartanka Championship-ka, markii ugu dambeysay oo ay sidaas sameyso kulammada sare waxay ahayd bishii April sanadkii 1988-kii.
>- Arsenal ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay kaliya sagaal jeer 42 kulan oo Premier League ah oo ay ka hoos ciyaartay tababare Unai Emery, laakiin labo ka mid ah kulamadaas waxay ka horyimaadeen iyagoo ka horjeeday kooxda Watford kal ciyaareedkii hore.